Ngaphambi indlela bahlele itayitela efulethini, kubalulekile kuqala balungise amaphepha adingekayo. Lowo Mbhalo wangonyaka we main okulungiswa kusengaphambili futhi kwenziwa iqhaza endows ke darstvennaya.Luchshe ngokwalo, kuphela uma senziwa umphakathi ummeli olungisa izivumelwano futhi igunyazwe yi kubo. Uma isitifiketi isipho usulungile, ungakwazi kakade uthintane neHhovisi Federal Ukubhalisa Service.
Nokho, kufanele sivume kuqala. Ngaphambi ukukhipha nangezenzo efulethini e FRS ngokuqondile, kubalulekile ukuhlola ukuthi wonke amadokhumenti sekulungile. Yiqiniso, uma sisebenzisa i-passport kuyodingeka sokubhalisa donor futhi yona. Kumele uhlole futhi irisidi sokukhokhwa imali yokubhalisa amalungelo impahla, kanye ilungelo ukuze uthumele impahla komunye umnikazi. Uma isitifiketi isipho ikhishwa efulethini, imibhalo kufanele kube ukuze. Ukuze wenze lokhu, kubalulekile ukwazi ukuthi imibhalo ayadingeka yokubhalisa lokuzinikezela kuya flat nhlangothi zombili. Pha, isibonelo, kufanele akhiphe isitifiketi esishoyo isihloko ukuthi uye kubhaliswe ku impahla, okuyinto iphiwa isipho.
I BTI kuyadingeka ukuthatha kula Real Estate cadastre. Le nqubo akuthathi isikhathi esiningi. Kusukela isidingo esifanayo ukuze uthole isitifiketi yokusungula ukuhlolwa kwezakhiwo zokuhlala. Lokuthi kumele babe imibhalo efakazela kwesokudla sakhe empahleni.
Ukuhlolwa yokuhlala kwenzeka ku uhide lwamacala. Okokuqala, izindlu kulinganiselwa indawo. Ingqalasizinda - inkomba kubaluleke kakhulu ukuthi kuthinta ukubaluleka. Futhi ukuzohlola isimo kwezindlu, isibalo square metres nokuxhumana. Intengo komhiaba ibalwa ngale ndlela: kusuka ngaphandle ngaphakathi. Ngoba into ebaluleke kakhulu abantu abaningi - kungcono indawo lula yendlu. Sakhiwo phansi - futhi yisici esibalulekile. Uma efulethini noma indlu is owned by abantu abaningana, isibonelo, lokuthi ungumnikazi ingcebo nomkakhe, kwemvume ke izophinda zidinga ebhaliwe.
Le nqubo Kwenziwa ummeli olungisa izivumelwano. Nokho, uma ubunikazi wenziwa ngendlela nokulingana, kungenzeka ukuba bangayeki isabelo sakhe ngaphandle kwemvume ezinye bamasheya. Ngakho-ke, ngaphambi ukukhipha nangezenzo efulethini, kubalulekile ukucacisa ifomu yabo kobunikazi. Ezezindlu, okuyinto co-ephethwe, ayikwazi ngaphansi kuhlukaniswa, uma omunye wabanikazi alivumelani. Abantwana abancane abakwazi ukungena izindlu nezindawo ukuthengiselana. Ngaphezu kwalokho, nabo abanalo ilungelo lokunikeza noma nginqabe sivumelwano, esebenza co-abanikazi ingcebo.
Kubo, kufanele wenze umzali omdala noma umnakekeli. Kuyefana nasendleleni abanikazi ezingasebenzi. Le nqubo asishintshi maqondana zokuhlala, izindlu kanye nezinye ingcebo. Amalungelo donee ithola impahla ngesikhathi lapho ukubhaliswa sekuqediwe. Ngokuvamile, le nqubo yenziwa kusengaphambili, futhi isikhashana lokuthi uhlala endaweni, okuyinto eye ngokusemthethweni idluliselwe kwenye. Lena ngokuphelele evamile, ikakhulukazi uma amalungelo zidluliselwa ezinganeni.
Ngaphambi isitifiketi isipho ifulethi noma indlu, udinga ukuqinisekisa nokwethenjelwa lomuntu lapho ubunikazi idluliswe. Ngokuvamile ngisho nezihlobo nihlela i ukumangala ezingemnandi. Uma intando kuyokwenzeka kuphela okukhona emva kokufa yomnikazi, isitifiketi isipho uzoqala ngokushesha. Ngenxa yalokho, ngemva kokubhaliswa usuphothuliwe, lo mbhalo kuziwa phakathi force. Kubalulekile futhi ukuba uqaphele ne kuhlukaniswa kwempahla esivuna amalungelo third-party. Ukukhwabanisa, ikakhulukazi ngokuhlobene impesheni, akuyona into engavamile. Nokho, uma iqiniso manga ayovulwa, kuleso simo inkontileka ingase ibuyekezwe izinkantolo.
Coast Guard - isihluthulelo ukuphepha wamanzi indawo
Ihhovisi lomshushisi yenzani lokho? Impendulo evela abasebenzi emsebenzini ehhovisi lomshushisi
Ngilukhokhela kanjani ukucutshungulwa Code Labour? umsebenzi Isikhathi eseqile: Wobudlelwano Ikhodi
UMthetho Wokuvikelwa Kokuncintisana
Romano-zamaJalimane lwetemtsetfo: isakhiwo kanye kuvisisa umthetho
SP Ukuqothuka: kubangela, izici futhi inqubo ukuqaliswa
A decoction of izimbabazane
Kunanzuzoni Egypt ngo-September?
Apple Tree "Venyaminovskoe": incazelo ezihlukahlukene, isithombe, ukubuyekezwa
Ukuqunjelwa - izimpawu izindlela ngokwelashwa nokuvimbela.
Umlingisi Feoktistov U-Anton: Biography siqu futhi zokudala
I Potsdam lenkomfa
Jordan Brown, intokazi killer. udilikajele
Millet - ukuthi ... Izitshalo
Yini esiza "Hypothiazid." "Hypothiazide": imiyalelo, ukubuyekezwa, ukufana